Dubai - Dhammaan Waxyaabaha Large iyo Yar
Published by Shirkadda Dubai City at Waxaa laga yaabaa 11, 2019
Miisaanka yar ee ugu sarreeya 14 Business Fikradaha lagu Sameeyo Meheraddaada Dubai. Ma waxaad ka yaaban tahay waxa ugu fiican hab lagu bilaabo ganacsi yar oo ku yaal Dubai? Laga yaabee inaad tahay mid ka mid dadka badan ee jecel inay bilaabaan ganacsi gaar ah ganacsiga Dubai laakiin adigu ma tihid nooca ganacsiga si loo aasaaso. Ama waxaad u baahan kartaa inaad ogaato oo aad fahamto waxa saxda ah ee looga baahan yahay si aad adigu u bilowdo ganacsiga Imaaraadka Carabta (UAE).
Hadday sidaas tahay, waxaad u timid dhinaca midig meel. Haddii aad ka fikireyso inaad lacagtaada geliso meherad Imaaraad, waxaad ka heli doontaa nidaamka aad ku dejiso meheraddaada si toos ah oo toos ah adiga oo ugu mahadcelinaya macluumaadka ku xusan qodobkaan. Waxaad sidoo kale yeelan doontaa a fahamka suuqyada ugu wanaagsan ee UAE Inaad maal gashid, si aan wakhtigaaga u khasaarin.
14 Fikrado Ganacsi ah oo Wanaagsan
1. Dhismaha iyo Dhismaha
Waxay umuuqdaan maalin kasta dhismayaal ama dhismeyaal cusub ayaa laga dhisayaa magaalada Dubai taas oo fursado badan u furtay markay tahay injineerrada iyo sidoo kale khubaro kale oo kala duwan oo ka tirsan waaxda dhismaha. Kobacaani waa mid muuqda marka aad aragto isbeddellada guryaha https://www.bayut.com. Taas macnaheedu waa maalgashadeyaashu waxay leeyihiin fursado aad u weyn goorta dejinta meherad kaas oo ku saabsan soo saarista ama iibinta agabyada cayriin ee loo adeegsaday waaxda dhismaha.
2. Saliid iyo gaas
Markay noqoto warshadaha saliida iyo gaaska, tani waxay sanadihii ugu dambeeyay ahayd udub dhexaadka dhaqaalaha dalka. Waxaa intaa dheer, Hantida imika ee UAE ayaa inta badan lagu soo rogi karaa waaxdan. Muddo sanado ah, warshadda batroolka iyo gaaska, in kastoo ay le'eg tahay baaxaddeeda, waxay sii waday inay fursad siiso maal-gashadayaasha cusub. Ganacsatada iyagu ah xiiseynaya warshadaha saliida iyo gaaska ama waxay ka bilaabi karaan xoqan, ama waxay iskaashi la yeelan karaan tirada meheradaha horey uga jiray halkan.
3. Adeegyada Maaliyadeed
Sababta oo ah joogitaanka ganacsiyada waaweyn ee kaladuwan ee magaalada Dubai, waxaa jira baahi aad u sareysa xirfadleyda sida xisaabaadka, xisaabiyaha iyo keydiyeyaasha, iyo sidoo kale bixiyeyaasha adeegyada sida Isku-daba-qaadashada kaararka deynta. Marka, haddii aad tahay qof leh taariikh asal ah oo ka mid ah adeegyada maaliyadeed ee aan hore u soo sheegnay, waxaa jira fursad wanaagsan oo aad ku abuuri karto ganacsi faa'iido leh waxay adeegyo lacageed siiyaan shirkadaha kale ee Dubai.
4. Cuntada iyo cabitaanka
Marka ay timaado warshadaha cuntada iyo cabbitaanka, ganacsiyada waxay ku fiicnaan doonaan ku dhawaad ​​meel kasta iyo xaaladaha badankood. Imaaraadku kama reebna qaanuunkaan. Baahida sareysa ee cunnooyinka iyo cabbitaannada dalka ka jira oo ay ugu wacan tahay tirada sii kordheysa ee shaqaalaha dibedda iyo dalxiiska xiisaha badan waxay fursado badan u helaan ganacsiyada. Marka xitaa iyadoo la adeegsanayo qorshe ganacsi oo fudud oo diirada saaraya gaar ahaan iibinta cuntooyinka degdega ah iyo cuntada fudud, waad yeelan kartaa shirkad aad u guuleysata.
5. Daryeelka caafimaadka
Sida wadamada kale ee horumarsan, dadka reer Dubai ka warqabaan caafimaadkooda waxayna muujiyaan heshiis weyn iyo walaac marka ay timaado. Maaddaama uu waddanku sii horumarayo, sidoo kale baahiyo ayaa loo qabaa bixiyeyaasha adeegga takhasuska leh iyo sidoo kale tas-hiilaadka wershadaha daryeelka caafimaadka. Haddii aad xirfad-yaqaan caafimaad tahay Adoo ka fikiraya inaad ganacsi ka bilowdo goobtaan, Dubai waxay cadeyn kartaa meesha ugu fiican ee laga bilaabi karo.
In kasta oo ay jiraan aad bay u yartahay walaacyada amniga ee ka jira Dubai marka loo eego dalal kale oo badan, ganacsiyada shaqsiyadeed ama ha noqdeen kuwa yar yar (marka ay timaado hantidooda) ma qaadanayaan wax fursado ah. Tani waxay keentay baahida sii kordheysa ee loo qabo shaqaalaha amniga, adeegyada iyo qalabka. Xitaa haddii aadan awoodin inaad ganacsi ka bilowdo adeegyada amniga khaaska ah, waxaad wali awoodi doontaa inaad lacag badan ku samayso qaybtan. Tusaale ahaan, waxaa la siin karaa aaladda amniga, sida nidaamyada digniinta iyo kamaradaha ilaalada, iyo kuwo kale.
Sababtoo ah koritaanka degdega ah iyo horumarka magaalada Dubai, hawlo fara badan sida dhismaha iyo warshadeynta ayaa sababay waxyeelo deegaanka. Isla mar ahaantaana dadku waxay sii ogaanayaan marka ay timaado faa'iidooyinka muhiimka ah ee ilaalinta deegaanka. Natiijada, waxaa jirtay tiro aad u badan oo fursado cusub ah oo ka jirta Dubai loogu talagalay u doodaha nolosha cagaaran iyo ganacsiyada bixiya adeegyo kala duwan oo dabiiciga ah, sida dib u warshadaynta qashinka iyo ilaalinta deegaanka.
Sida aynu wada ognahay, Dubai waxay noqotay mid ka mid meelaha ugu badan ee dadku u aado meelaha fasaxa adduunka, sida lagu arkay tirada hoteellada xiddig ee shan-xiddig leh ee hadda ka shaqeeya gudaha UAE. Dubai waxaa ku nool malaayiin soo booqda sanad walba. Tanina waxay abuurtay fursado badan oo loogu talagalay dadka inay ku bilaabaan ganacsiyo gaar loo leeyahay taasoo ku lug leh u xareynta booqdayaashaas iyo dalxiisayaasha si uun ama qaab kale.
Markay Tahay qaybta tamarta ee UAE, in kasta oo ay heystaan ​​ciyaartoy ku filan weli waxaa jira fursado badan oo ganacsiyaad gaar loo leeyahay ay doonayaan in laga caawiyo dayactirka xarumaha tamarta ee kala duwan. Haddii aad tahay qof raadinaya inuu ganacsi ka yeesho UAE, qaybta dayactirka xarunta tamarta waxay noqon kartaa hal ikhtiyaar oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso haddii aad leedahay xirfado la xiriira ama khibrad u leh.
Dubai ayaa xarun u ah meheradaha oo dhan waaxyo badan oo ay la kulmaan oo ka ganacsadaan badeecadaha ama adeegyada. Oraahda waxaa loogu yeeraa "dhoofinta iyo soo dejintaWaa mid aad adigu rabtid si joogto ah u maqal macnaha guud ee Dubai. Waxa jira fursado tiro badan oo ah dhoofinta ama soo dejinta alaabada badan; tusaale ahaan, agabka moodada, miraha la qalajiyey, dharka, dharka dhejiska ah, bacaha balaastigga ah, gawaarida iyo inbadan.
11. Ganacsiga Ganacsiga
Xawaareynta ganacsiga waa cusub laakiin fikirka sii kordhaya ee UAE. Ayadoo ay ugu wacan tahay dadkeeda balaaran ee qurbaha, oo ay weheliso dookhyada kaladuwan ee dadka halkan ku nool, fikradda ah hanashada meheradda ayaa si aad ah loogu guuleystey sannadihii ugu dambeeyay. Wershadaha cunnada degdega ah waa mid ka mid ah Waaxaha sida dhakhsaha u kobcaya ee Dubai, furitaanka fursado badan oo ganacsi wareeg ah
12. Hay'adaha shaqada
Markay tahay Dubai, mid kale fursado ganacsi oo la yaab leh la xiriira hay'adaha shaqada kuwaas oo si gaar ah loogu abuuray shaqaale xirfad leh. Iyada oo waddanku uu dhaqso u kobcayo dhaqaalaha, shaqaale badan oo xirfad leh iyo shaqaale badan ayaa loo baahan yahay in la ilaaliyo in warshadaha kaladuwan ee UAE ay socodsiiyaan. Intaa waxaa sii dheer, baahi weyn ayaa loo qabaa khubarada IT-ga, xisaabaadka, kalkaaliyeyaasha, injineerada, iyo sidoo kale shaqaalaha dhismaha, iyo kuwa kaleba, ee dalkaan.
13. Naadiyada Naadiyada, Barkadaha, iyo Madadaalada
Dubai ayaa ka mid ah kuwaa magaalooyinka ay dadku had iyo jeer mashquul ku yihiin. Marka gambaleelka la dhawaajiyo si loo calaamadeeyo dhamaadka maalmahooda shaqada, dadka halkan jooga waxay rabaan inay xoogaa yar iska sii daayaan. Had iyo jeer waxay u baxaan khamri ama labo waxayna waqti la qaataan asxaabtooda iyo asxaabtooda si ay uga takhalusaan walwalka ku kalifaya maalin walba. Qofkasta oo ka fikiraya dejinta ganacsi gaar ah ee dalka ikhtiyaar wanaagsan waa in la aasaaso goob lagu caweeyo ama ganacsi madadaalo gaar ahaan loogu talagalay. Maalgalinta naadiyada habeenkii, bar ama madadaalo meheraddu waa hab wanaagsan oo aad ku bilawdo.
14. Wakaaladda safarka
Ahaanshaha mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee fasaxyada adduunka, waxaa jira fursado waaweyn oo loogu talagalay hay'adaha safarka ee Imaaraadka. Malaayiin dalxiisayaal ah iyo soo-booqdeyaal ayaa qorsheynaya inay aadaan kana baxaan Dubai sanad walba. Intaas waxaa sii dheer, guud ahaan dadweynaha dalka waxaa si aad ah isugu buuran muhaajiriin ka kala yimid wadamo kala duwan, dhammaantoodna leh baahi safar. Tani waxay ka dhigeysaa shirkad safar safar ganacsi gudaha UAE waa maal gashi mudan in laga fiirsado.
Inaad ganacsi ka sameysato Dubai waa qaraabo toos ah, si kastaba ha noqotee diyaarsanaanta iyo isku xirnaanta naftaada aqoon gaar ah Waxay gacan ka geysan doontaa sameynta nidaamkan sida ugu macquulsan, uguna diyaarin doonta Xalkaas, hoosta waxaan ku haynaa xaqiiqooyin muhiim ah oo ku saabsan Dubai oo ay tahay inaad ogaato ka hor intaadan ganacsi ka bilaabin halkaas. Marka, aan u galno iyaga:
Xaqiiqo muhiim ah oo lagu ogaanayo kahor bilaabista ganacsiga Dubai
Bilaabista shirkad aad iska leedahay magaalada Dubai ayaa dad badani u arkaa inay tahay wax abaal marin ah sidoo kale faa iido badan. Laakiin sidoo kale waxay dareemi kartaa ganacsi halis ah markii aad tahay maalgashi shisheeye. Intaa waxaa dheer, in la maalgashado a Shirkad ku taal Dubai adoo ah maal-gashade shisheeye waxaad ubaahantahay inaad lashaqeysid Muwaadin UAE kahor intaan laguu oggolaanin inaad shirkad bilowdo.
Muwaadinku (lammaanahaaga) wuxuu u baahan yahay inuu lahaado qayb badan ganacsiga. Haddii aad rabto si aad ganacsi uga bilowdid Dubai, hubi inaad ku cayaarto buugaagta ama haddii kale waad waayi doontaa maal-gashiga.
Waxaa jira ku saabsan Meel ku taal Dubai meheradaha xishoodka ma leh. Intaa ka dib, raacidda kanaalada saxda ah waxay micnaheedu noqon doontaa soo laabasho iyo macaash badan markii aad aasaasid meherad aad iska leedahay. Hoos waxaa ku yaal tillaabooyin qaarkood oo aad u baahan tahay inaad qaaddo haddii aad jeceshahay inaad ganacsi ka bilowdo Dubai.
1. Samee Daraasado Fahamka ah
Shaki kuma jiro in jawiga ganacsiga ee Dubai waxay u furan tahay dadka dhaqamada kala duwan leh, laakiin waxaa muhiim ah in la raaco habraacyada qaarkood ka hor intaadan aasaasin ganacsi. Mid ka mid ah kuwan waa qabashada daraasado suuragal ah. Tani waxay xaqiijineysaa taas aqoon fiican baad u leedahay Dubai. Xaaladaha suuqa, dhagaystayaasha bartilmaameedka ah, qawaaniinta, saadka iyo qodobo kale. Xaqiiqdii waxay saameyn ku yeelan doontaa guusha ganacsigaaga. Waxaad ku go'aamin kartaa macluumaadkan adiga oo adeegsanaya daraasad suuq, la tasho khubaro iyo facooda warshadaha, ama falanqaynta tartan. Barashada tartamayaashaada, qaas ahaan, waxay soo saari kartaa macluumaad qiimo leh: waad arki doontaa waxa si wanaagsan u shaqeynaya iyo wixii aan si wanaagsan u shaqeynaynin. Sidaa darteed wax uga barasho guulihii ay gaadhay iyo waliba khaladaadkoodii.
2. U fiirso Lammaanaha Ganacsiga Deegaanka
Kahor intaadan aasaasin ganacsi ahaan maalgashade shisheeye Dubai, sharci ahaan waxaad u baahan doontaa lammaane maxalli ah. Waxay labadooduba noqon karaan dhalasho UAE, ama shirkad maxalli ah. Intaa waxaa dheer, sida sharciga uu qabo, lammaanaha ganacsiga ee maxalliga ah waa inuu lahaadaa saami shirkadeed weyn. Waxaa jira siyaabo badan oo aad u maareyn karto xaaladdan: lammaanahaaga ganacsi wuxuu noqon karaa qof si isku mid ah ugu lug leh ganacsiga. Ka qayb qaadashada Go'aannada iyo kaala shaqaynta tallaabo kasta oo jidka lagu maro. Bedel ahaan, waxaad raadsan kartaa "lamaane hurdo", qof maal geliya maalgalin amase laga yaabo inuu magaca oo keliya, oo aad u badan gacmo-furan inta aad mas'uul ka tahay maamulka maalmeedka ganacsiga. Dambe waa gole caadi ah loogu talagalay ajaanibta maal gashanaya ganacsi gudaha Imaaraatka.
3. Hubi ikhtiyaarrada kuwaas oo aan u baahnayn in lammaanaha degaanka
Haddii aadan awoodin inaad hesho lammaane maxalli ah oo aad ku kalsoon tahay oo aad ku faraxsan tahay inaad ganacsi la yeelato. Waxaa laga yaabaa inay wali jiraan xulashooyin kuu furan adiga. In kasta oo xaaladaha badankood ay dawladda Dubai u baahan tahay maal-gashadayaal shisheeye si ay ula shaqeeyaan lamaane maxalli ah oo jooga Dubai. Waxay dhowaan soo saareen sharci u oggolaanaya muwaadiniinta shisheeyaha ah inay iska leedahay 100% noocyada ganacsiga qaarkood. Ikhtiyaar kale ayaa noqon kara in ganacsigaaga lagu saleeyo mid ka mid ah aagagga ganacsiga xorta ah ee dalka, halkaas oo xeerarkan aan lagu dabaqi karin. Si kasta ha noqotee, waxaa lagugula talin doonaa inaad raadsato talo qareenka deegaanka si aad u aragto wixii xulasho ah ee kuu furan adiga.
4. Kor u qaad dhaqaalaha loo baahanyahay (Startup Capital)
Raadinta bilowga ah dabcan waa loo baahan yahay markii la aasaasayo nooc shirkad kasta. Markaad ganacsi ka bilaabayso Dubai waxaa sidoo kale jira shuruudo gaar ah oo arrintan la xiriira. Kahor inta aan laguu oggolaanin inaad maal gasho oo aad ganacsi ka bilowdid magaalada Dubai. Waxaa lagu weydiisan doonaa inaad tusto dowladda gobolka inaad haysatid ugu yaraan lacag loogu baahan yahay. Maalgashiga loo baahan yahay wuxuu inta badan u dhexeeyaa $ 10,000 iyo $ 50,000. Tani way kala duwanaan kartaa haddii aad tahay kana shaqeeya mid ka mid ah aagagga xorta ah ee Dubai.
5. Diiwaangelinta Ganacsigaaga
Kahor intaadan u dhowaanin Wasaaradda Ganacsiga. Waa inaad buuxisaa shuruudaha qaarkood si aad u dhammaystirto hawsha diiwaangelinta ganacsigaaga. Haddiise aadan hubin waxaad samayn lahayd. Waa inaad latasho qareen ku sugan Dubai oo ku takhasusay hkor u qaadida maal-gashadayaasha shisheeyaha inay dhammaystiraan diiwaan-gelinta ganacsigooda
Ugudambeyn, bilaabida ganacsi aad adigu iska leedahay Magaalada Dubai waxay isu beddeli kartaa ganacsi aad u guul badan, haddii aad raacdo fikradaha iyo talooyinka halkan lagu xusay. Intaa waxaa sii dheer, naftaada lasocodka adoo markasta wanaajinaya xirfadahaaga ganacsi.
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa tilmaamo wanaagsan shaqooyinka Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hadda waad heli kartaa hagayaal, talooyin iyo shaqaalaynta Imaaraadka Carabta Emirates oo leh luqaddaada.